Yonke into esiyilindeleyo kwaSony kwiMWC 2019 | I-Androidsis
I-Mobile World Congress 2019 e-Barcelona, ​​eSpain iyeza. Iifemu ezininzi zokwenza iifowuni ziya kwenza ubukho kumsitho weetekhnoloji owaziwayo, kubandakanya iSony, inkampani yaseJapan eneefowuni ezininzi zeXperia zokuveza.
Ngaphambili besithetha ngayo yonke into esiyilindeleyo Huawei y Xiaomi. Ngoku Lixesha lokuba sichaze yonke into esiyilungiselelwe nguSony. Masibone!
Kukho izixhobo ezininzi eziza kudityaniswa yinkampani yaseJapan kwikhathalogu yayo. Kananjalo, ii-smartphones ezine kulindeleke ukuba zifike: Sony Xperia XZ4 o Xperia 1, iflegi yakho elandelayo; i I-Xperia XA3 kunye ne-XA3 Ultra -inokubizwa ngokuba yi-Xperia 10 kunye ne-10 Ultra-; kwaye i Xperia L3.
1 I-Sony Xperia XZ4 okanye i-Xperia 1
2 I-Sony Xperia XA3 kunye ne-XA3 Ultra okanye i-Xperia 10 kunye ne-10 Ultra
3 I-Sony Xperia L3
4 Amaxabiso anokubakho kunye nezinye iindaba
I-Sony Xperia XZ4 okanye i-Xperia 1
Mhlawumbi olona phawu lubalaseleyo loku Iiflethi Yiba ngu Isikrini seCinemaWide eza kufika ngayo. Oku kuyakuba ne-21: 9 factor ratio, as speculated, and a length of 6.5 or 6.4 inches. Itekhnoloji yoku iya kuba yi-OLED HDR kwaye iya kuvelisa isisombululo se-QuadHD + 3,360 x 1,440 pixels. Iya kusilela ukufundwa kweminwe phantsi kwescreen.
Ngokumalunga nezinye izinto, sinokuba phambi kweprosesa Snapdragon 855 nguQualcomm. Le iya kuba yinto enengqiqo, kuba kubonakala ngathi inkampani iya kuyo yonke into enesi sigxina. Iya kuza nememori ye-6 GB ye-RAM kunye nendawo yokugcina yangaphakathi ye-128 GB -nokwandiswa nge-microSD-, nangona zinokubakho ezinye izinto ezahlukeneyo.
Iya kuxhotyiswa nge-MP ye-MP eyi-52 yangaphambili Kunye nezinye iisenzi ezimbini (i-26 kunye ne-8 MP) yokugqibezela ukuseta ikhamera kathathu ngasemva. Kwicala elingaphambili, i-24 MP shooter iya kuba yinto esiza kuyifumana. Ukongeza, ukusebenza koku kuya kunikwa amandla yi-3,680 mAh ibhetri yomthamo. Ifowuni yayiza kusebenza Android Pie.
I-Sony Xperia XA3 kunye ne-XA3 Ultra okanye i-Xperia 10 kunye ne-10 Ultra
Ezi fowuni nazo izakufika yenziwe ngeCinemaWide screen Umkhuluwa wakhe uya kuyisebenzisa, nangona i-diagonals yabo iya kwahluka, kunye nezigqibo zabo. Ngeenkcukacha, nangona ubukhulu beepaneli bungaziwa, kulindeleke ukuba bube bancinci; 5.9 intshi ubude inamahemuhemu kwiXperia XA3, umahluko oqhelekileyo. Ngokusekwe kwizigqibo zabo, baya kuba yi-FullHD +.
Iiprosesa eziya kuqhayisa ziya kwahluka kwaye zibe phakathi kuluhlu; ngokukodwa kuthotho lweQualcomm's 600. Kananjalo, ababonakalisi bakulungele ukulindela i-Snapdragon 636 okanye i-660 kwi-Xperia XA3 kunye ne-SD670 SoC okanye SD675 ikwaQualcomm kukwahluka okuphezulu kakhulu, nangona kunokwenzeka ukuba siza kubona ifayile ye- SD710 Okokugqibela. Kuya kubakho i-RAM ye-4 okanye ye-6 GB kuzo zombini iitheminali. La macandelo alindeleke kakhulu.
Idatha evuthiweyo ngaphambili iphakamisa oko I-Xperia XA3 okanye i-Xperia 10 inobungakanani be-155.7 x 68.3 x 8.4 mm kunye nokonyuka okuncinci kobubanzi becala lekhamera, eliya kuba yi-8,9mm ubukhulu. Kukho iingxelo zokuba ikhamera ezimbini ngasemva zale modeli inye inesiphawuli esikhulu se-23 MP kunye ne-8 MP yesibini sensor. Iya kuba nomfundi ofaka iminwe ecaleni.
I-Sony Xperia L3
El Xperia L3 Yeyona fowuni incinci ihluziweyo kwaye inamahemuhemu enkampani eza kuthi ithiwe thaca kwiNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ka-2019. Nangona kunjalo, siyazazi iinkalo eziphambili zayo, kwaye enye yazo kukuba izakuba nayo Iscreen se-intshi eyi-5.7 ngesisombululo se-HD + se-1,440 x 720 pixels kunye nomlinganiso we-18: 9.
Isixhobo sinokuhambisa i Iprosesa yeMediatek eya kuhamba kunye ne-3 okanye i-4 GB ye-RAM kunye ne-32 okanye i-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Iya kuba ne-3.5mm audio jack kunye ne-USB-C port, ukuze ikwazi ukuhlala kwitekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza. Kuyatshiwo ukuba ubukhulu bayo buyi-153.8 x 71.9 x 9 mm, ixhobisa ibhetri eyi-3,300 mAh, ithwala i-Android 8.1 Oreo kwaye nomfundi oneminwe onayo ubekwe ecaleni.
Kwelinye icala, ngokubhekisele kwisebe lekhamera, kuyakubakho I-13 megapixel + 2 megapixel yoqwalaselo ngasemva. Ikhamera ye-megapixel eyi-8 ikhona ngaphambili kwii-selfie ezintle.
Amaxabiso anokubakho kunye nezinye iindaba
Amaxabiso eziza kufika ngawo ezi ndawo zokugqibela awaziwa. Nangona kunjalo, I-Xperia L3 inokubiza malunga ne-199 euros eYurophu, esekwe kukuvuza kwangaphambili. IXperia XZ4 ayizukuxabisa ngaphantsi kwama-euro angama-700, silinde, ngelixa I-Xperia XZ3 iya kuxabisa malunga ne-400 euro, Kuxhomekeka kukwahluka kwayo.
Kwelinye icala, sinethemba lokuba inkampani iya kuzisa okanye isungule ezinye iimveliso. Asinakumangaliswa kukubona iithelevishini ezintsha ze-4K okanye ezinye iitermina. Kungekudala siza kuyazi kakuhle into egcinelwe thina ifemu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Yonke into esiyilindeleyo kwi-Sony kwi-MWC 2019
I-Facebook isusa i-Onavo VPN kwiGoogle Play